मन्त्रीको भक्तपुरसँग झगडा परेको जस्तै देखियो : सांसद बस्नेत — Bhaktapurpost.com
मन्त्रीको भक्तपुरसँग झगडा परेको जस्तै देखियो : सांसद बस्नेत
भक्तपुरपोस्ट संवाददाता भक्तपुर, २७ जेठ २०७९
भक्तपुर, २७ जेठ २०७९
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा(एमाले)का पोलिटब्युरो सदस्य समेत रहेका भक्तपुरबाट निर्वाचित संघीय सांसद महेश बस्नेतले बजेटबारे असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् । उनले भौतिक तथा अर्थमन्त्रीको भक्तपुरसँग झगडा परेको जस्तै देखिएको दावी गरेका हुन् ।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै सांसद बस्नेतले प्रश्न गरे, ‘हनुमन्ते, मनोहरा करिडोरको २ अर्व कता हरायो ? वीर अस्पताल र क्यान्सर सेन्टरको २ अर्व बजेट कता हरायो ? ४० करोड छुट्टीएको गोदावरी रानीकोट सडकमा ७ लाखमात्र बजेट छुट्याएको प्रति पनि उनले चिन्ता व्यक्त गरे । ६ करोड, ४ करोड तथा २ करोड बजेट भएकोमा अहिले लाखमात्र बजेट छुट्याइएको उनको दावी छ ।
विगतमा समयले विकास ल्याएको हो भन्ने कांग्रेसका जिल्ला नेताहरु अहिले कुन दुलोभित्र लुकेर बस्ने हुन भन्दै उनले व्यंग्य समेत गरे । ‘सरकारले विकासको काम गर्ने र जनतालाई राहत दिने कुनै लक्षण देखिँदैन ।’उनले दावी गरे । यो वर्षको बजेट सिमित नेता र प्रधामन्त्रीको घरमा मात्र गएको उनको आरोप छ । जनताले फेरि पनि एमालेको सरकारलाई मिस गरिरहेको र केपी ओलीलाई मिस गरिरहेको उनको भनाइ छ ।